FXG Oromiyaa Bakkoota Gara Garaatti Akka Itti Fufetti Jira. | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
February 17, 2017 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG	Leave a comment
Sakatta’iinsa tasa uumameen qabamuu isaanii Qeeroon magaalichaagabaasee jira.
Akkasuma godina shawaa kaabaa aanaa Kuyyuutti loltootni mootummaa caasaa humna adda uummata keessaa waliin tahudhaan loltuun sadii ol hidhannoo waliin miliquu gabaasni nu gahe ifa godha.
Odeessa naannoo Amaara irraa nu gahaa jiruun Gojjam Bahaa bosona mootummaa wayyaaneen ofiin waamu akkasuma qonnaa xaafii kan mootummaa tahes walumaa galatti kaleessa ibiddaan barbadeeffamuu caasaan dhaabaa naannichaa gabaasee jira. Goojjam lixaa aanaa Meeccatti waraqaan” Gibira hin kaffalinaa, Mootummaaf hin ajajaminaa, Mormiin keenya itti haa fufu” jedhu Guraandhala 13 bittimfamuu caasaan gabaaseera.
Akkasuma naannoo Amaaraa magaala Bahirdaritti poolisoota kora bittinneessaa fi humna raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lola ka’een walitti dhukaasuun raayyaa ittisaa keessaa namni lama du’e akkasuma waardiyaan tokkos ajjeefameera. Kanumaan kora bittinneessaan meeshaan irraa fuudhamee hidhaatti guuramaa jiraachuus dhagahame.
Haala hidhaa ilaalchisuun uummanni bakka jiruu hidhamuu dura dhaabbatee utuma falma isaa itti fufee jiruu guyyaa lamaan kana bakkaa fi baayina namoota keenya hidhamanii gabaafame
1. Aanaa Ammayyaa irraa nama 27
2. Meettaa Roobii irraa nama 31
3. Buraayyu irraa nama 12,
4. Finfinnee bakka adda a ddaa irraa nama 12 Walumaa gala gara nama 85 olii guyyaa lama keessatti wayyaaneen mana hidhaatti guurtee jirti. Hidhaan yoo furmaata taheef wayyaaneen ammas uummata naga gara hidhaatti guuruu amala godhatte jirti.
Lola humneen waraanaa mootummaa keessatti tahe shawaa lixaa magaala Amboo keessatti ammas yeroo lammaffaa eegaluun dhagahame. Walittti bu’iinsi humna waraana diinaa gidduu jiru gama biraanis babal’ataa jira.
Injifnnoon uummata oromoof
Previous PostPrevious PostNext PostFXG Oromiyaa Bakkoota Gara Garaatti Akka Itti Fufetti Jira.